सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलित, के चाहन्छन् डाक्टरहरू ? - Everest Dainik - News from Nepal
सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलित, के चाहन्छन् डाक्टरहरू ?
काठमाडौं, चैत २३ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा आफूहरूलाई एक तहबाट अर्कोमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था नराखिएकामा सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् । सबै सरकारी चिकित्सकलाई संघ सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।
याे पनि पढ्नुस शल्यक्रियामा लापरबाहीः काउन्सिललाई नै ढाँटे डाक्टरले !
माग पूरा गराउन सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले देशभरका १४ सय सरकारी चिकित्सकलाई पूर्वनिर्धारित अप्रेसन, विशेष परीक्षण र स्वस्थ्य सेवा बहिष्कार गर्न भन्दै आन्दोलनमा उतारेको हो । ‘हामी समायोजनमा जान्छौं, तर सबै चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्छ,’ सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘कुनै चिकित्सकलाई सधैँ एउटै गाउँपालिकामा मात्र सीमित गराए र राख्ने हो भने अध्ययनलगायत उसको वृत्ति विकास कसरी हुन सक्छ ?’ यो समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।
याे पनि पढ्नुस घुस लिंदा लिंदै पक्राउ परे नरदेवी अस्पताल प्रमुख